ShortStack: Ibe ọdịda facebook na ndorondoro mmekọrịta ọha na eze mere Mfe | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-eji Facebook dị ka ihe enyemaka iji mee ka okporo ụzọ gaa na azụmahịa gị site na asọmpi ma ọ bụ ịkpọ oku, iji usoro ihe jikọrọ ọha na eze dị mkpa. Site na ShortStack ị nwere ike ịmepụta ọwa sitere na isi iyi - email, mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi dijitalụ - gaa na ibe weebụ na-elekwasị anya nke ọma.
Ibe ọdịda Facebook
Site na ShortStack, ị nwere ike iwulite ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ibe ị ga-enweta maka asọmpi, ịkwụ ụgwọ, ajụjụ, na ọtụtụ iji jikọọ ndị ahịa gị. Atụmatụ na uru gụnyere:
Na-akpali ma na-egwu egwu - Nye ndị na-emejupụta ụdị gị ụgwọ maka ohere iji nweta ihe nrite. Ma ọ bụ mepụta àgwà mmadụ dị ka Kedu ụdị ụgbọ ala egwuregwu ị bụ? or Kedu 1990s rapper ị bụ? ma nata adreesị ozi-e tupu ịkọwa azịza ya.
Ngalaba omenala maka mkpọsa akpọ aha ọcha - Omenala ngalaba na-enye gị ohere iji URL nke aka gị maka mkpọsa gị. E wezụga ịmatakwu akara ngosi na inye ahụmịhe na-acha ọcha, ha na-emeziwanye SEO nke mkpọsa gị ma nye ndị sonyere ọkwa ntụkwasị obi ọzọ mgbe ha na-eleta mkpọsa gị.
Jiri ihe eji eme ihe iji kpokọta data ịchọrọ - Ọdịda peeji adị ka weghara ọbịa 'ozi kọntaktị. Iji ngwa ngwa ShortStack na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịnakọta data ịchọrọ ngwa ngwa site na ime ka ndị mmadụ mejupụta ụdị gị. N'ihe banyere ozi ha, enyere ha aka inweta onyinye ha - ntinye aka na ntinye ego, akwụkwọ ntanetị, koodu ego, wdg.
Njikwa nhazi zuru ezu - Mepụta mpempe akwụkwọ na-enweghị ngwongwo na oku doro anya na-ime. Weghachi uche ndị ọbịa gị, na ozi ịkpọtụrụ ha, na-eji ndebiri ndebiri nke ShortStack na ụdị dị mfe, na-aza maka ekwentị. ShortStack's ndebiri ndebiri na-eme ka ị gafere onye nrụpụta na ihe nrụpụta.
Debanye aha maka Nnwale efu
Asọmpi Ikwu Okwu Facebook
Oge agafeela aka iji aka dekọọ ozi gị niile. Jiri ShortStack mee ka ị nweta ihe niile ị kwuru na Instagram ma ọ bụ Facebook. Ntinye gụnyere aha onye na-ekwu okwu, nkọwa ha na njikọ nke ikwu. Atụmatụ na uru gụnyere:
Họrọ ngwa ngwa ndị mmeri - Jiri ShortStack's random ntinye selector ịhọrọ onye mmeri. Họrọ ndị mmeri ma ọ bụ ọtụtụ, wee kpọsaa onye mmeri na ibe Facebook gị.
Na-akwalite njikọ aka ma wuo ndị na-esonụ - Site na ikwu ịbanye asọmpi, ndị na-abanye ga-aza ajụjụ na post na Facebook Page ịbanye. Mkparịta ụka a na-eme ka aka gị dịkwuo elu ma na-eme ka ngosipụta nke akara gị dịkwuo elu. Gbaa ndị na-aza ajụjụ ume ka ha soro ma ọ bụ nwee mmasị na profaịlụ gị, wee kwado asọmpi ikwu okwu oge niile wee hụ ka ndị na-eso gị na-eto!
Na-akpaghị aka wepu okwu abụọ ma tinye mmasị dị ka votu - ShortStack nwere ihe ngwọta maka ndị sonyere na-aza ajụjụ ugboro ugboro – na-akpaghị aka na-egbochi ndenye oyiri. Wantchọrọ ịgụnye oyiri? Nsogbu adịghị! Nhọrọ a bụ nke gị. Maka ederede Facebook, ị nwekwara ike ịhọrọ itinye mmasị na azịza dị ka votu ma mee ka ohere ndị na-ekwu okwu nweta mmeri na ọtụtụ ntuli aka ha na-enweta.
Ibe ọdịda na ozi ịntanetị zoo
Zipu ozi ịntanetị akpaghị aka ozugbo mmadụ dejupụtara mpempe akwụkwọ gị, ma ọ bụ hazie oge ị ga-eziga ya na ụbọchị ọzọ. Ziga ha na ndepụta gị niile ma ọ bụ ụfọdụ akụkụ.
Tinye aka site na iji ozi ịntanetị emebere - Ekwela ka ndu gị site na mpempe ShortStack gị laa n'iyi. Jiri adreesị ozi-e ndị ahụ ị chịkọtara ma zipụ ozi ịntanetị iji kwalite akara gị mgbe mkpọsa gị gafere. Hazie ozi ịntanetị iji kwupụta onye mmeri, kpọsaa ngwaahịa ọhụrụ / ihe ndị na-abịanụ, kesaa azụmahịa pụrụ iche, kwusaa na ịmepe vootu emepela maka asọmpi, kesaa nkọwa maka mkpọsa na-abịanụ, wdg.
Jikọọ na ndị ahịa ozugbo - Jiri autoresponders ziga nkwenye email na-akpaghị aka na onye ọ bụla nke na-abanye gị zoo ma ọ bụ dejupụta gị ụdị. Ndị na - echekwa onwe ha nwere ọnụego elu elu, yabụ jiri ohere iji zipu ozi nkeonwe ma ọ bụ onyinye pụrụ iche.
Ndị nnata ihe nzacha maka mmetụta kasịnụ - Nzacha ndị nnata email na-enyere aka hụ na ndị ziri ezi na-ahụ ozi gị. Megharịa ndepụta gị ka naanị ndị nabatara ka akwadoro ndenye ha, tinye onyonyo ma ọ bụ natara n'ime ụbọchị ụfọdụ ga-enweta email gị.
Mee ka usoro ịzụ ahịa email gị kwalite - Ọ dịghị mkpa ka iwekota na a iche iche email ahịa n'elu ikpo okwu! ShortStack na-enye gị ohere ịnakọta ndenye ma zipụ ozi ịntanetị niile n'otu ebe.
Melite ozi ịntanetị na nkeji na ndebiri - Short na oge? Ndebiri email na-enye gị ohere ịmepụta ozi ịntanetị na nkeji. Enwere otutu ndebiri ịhọrọ site na ihe nrụpụta email ShortStack niile wuru site na iji usoro kachasị mma maka ụdị email ị họọrọ iziga.
Na-etinye aka na ndị debanyere aha gị nke ọma - Zụlite usoro nke ozi ịntanetị na-akpali iji zipu na-akpaghị aka, ọnụọgụ ụbọchị ole na ole mgbe mmadụ debanyere aha nzipu ozi gị. Ozi ịntanetị ndị a na-enyere gị aka ịnọgide na-akpọtụrụ ndị ahịa gị mgbe niile, na-enweghị ebuli mkpịsị aka.
CAN-SPAM na GDPR Dabara - Ntinye abụọ na-agbakwunye mgbakwunye nkwenye ọzọ na usoro ntinye aha: ndị na-abanye ga-akwado na ha chọrọ ịnata ozi ịntanetị n'aka gị. Ntinye abụọ na-eme ka ị hụ na ị kwadoro iwu ọhụrụ, gụnyere GDPR na European Union. ShortStack na-enye gị ohere izu ike dị mfe site na ilekọta nkọwa nkọwa CAN-SPAM maka gị. Naanị họrọ profaịlụ azụmaahịa ịchọrọ itinye na email, anyị ga-eme ndị ọzọ.
Mee ọfụma, dị ire ma dị ịtụnanya na mgbasa ozi mmekọrịta na-enweghị nchegbu gbasara teknụzụ dị n’azụ ha.
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ ShortStack
Tags: auto-ọrụemail nhazingwa facebookNkọwa okwu Facebookasọmpi facebookibe facebookmobile ngwa ọdịnalaobere akpana-elekọta mmadụ ọdịda peeji nke
Uzo ise Ulo oru Martech na-egwu egwuregwu ogologo oge nke enyere 28% Drop na ahia mmefu